FAA waxaa lagu tijaabiyey inay xaqiijiso Boeing 737 MAX: Dacwadda Dambiyeed ee Maxkamadda Sare
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » FAA waxaa lagu tijaabiyey inay xaqiijiso Boeing 737 MAX: Dacwadda Dambiyeed ee Maxkamadda Sare
Airlines • Aviation • News • Dadka • Ammaanka • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Xeerbeegti weyn oo heer federaal ah oo ku sugan Degmada Waqooyiga Texas ayaa soo celisay dacwad maanta ku soo oogtay Duuliye Sare oo hore u ahaa Shirkadda Boeing (Boeing) isagoo khiyaanay Kooxda Qiimaynta Diyaaradaha ee Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka (FAA AEG) oo la xiriirta qiimeynta FAA AEG ee qiimeynta Boeing 737 Diyaaradda MAX, oo qorsheynaysa inay khiyaameyso macaamiisha Boeing ee fadhigeedu yahay Mareykanka si ay ugu hesho tobanaan milyan oo doolar Boeing.
The Etihiopian Airlines iyo Lion Air Murder waxay leeyihiin magac: Eedeysane waa Duuliye Sare ee Boeing Mark A. Forkner?
Bishii Oktoobar 28, 2018, diyaarad nooceedu ahaa Lion Air oo nooceedu ahaa Boeing 737 MAX ayaa burburtay waxaana ku dhintay 189 qof.
March 10, 2019, diyaarad Ethiopian Airlines ah oo nooceedu ahaa Boeing 737 MAX ayaa burburtay waxaana ku dhintay 157.
Bishii Oktoobar 14, 2021, Duuliyihii Farsamada Boeing Mark A. Forkner ayaa lagu soo oogay Mareykanka inuu khiyaanay FAA si uu u oggolaado shahaadada Boeing MAX 737. Boeing waxay ku badbaadisay tobanaan milyan oo doolar dariiqaas shahaadaynta ah.
Sida ku cad dukumiintiyada maxkamadda ee laga soo gudbiyey Waqooyiga Degmada Texas Federal Court, Mark A. Forkner, oo 49 jir ah, horena u ahaa Gobolka Washington haddana ka tirsan Keller, Texas, ayaa la sheegay inuu khiyaanay FAA AEG inta lagu guda jiro qiimeynta iyo shahaadaynta diyaaradda Boeing 737 MAX.
Sida lagu eedeeyey dacwadda, Forkner wuxuu siiyay wakaaladda war been abuur ah, aan sax ahayn, oo aan dhammaystirnayn oo ku saabsan qayb cusub oo ka mid ah kontaroolada duulimaadka ee Boeing 737 MAX oo loo yaqaan Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Sababtoo ah khiyaanadiisa la sheegay, dukumenti muhiim ah oo ay daabacday FAA AEG ayaan lahayn tixraac MCAS. Dhanka kale, buugaagta diyaaradda iyo agabka tababarka duuliyeyaasha ee shirkadaha duulimaadyada ee fadhigoodu yahay Mareykanka ma lahan wax tixraac ah oo ku saabsan MCAS-macaamiisha Boeing ee fadhigeedu yahay Mareykanka waxaa laga qaaday xog muhiim ah markii ay sameynayaan oo ay dhammaystirayaan go'aanadooda ah inay Boeing ku siiyaan tobanaan milyan oo doolar 737 MAX diyaaradaha.
Kaaliyaha Xeer Ilaaliyaha Guud ee Kenneth A. Polite Jr. Qaybta. “Markii uu sidaas samaynayay, wuxuu ka joojiyay shirkadaha diyaaradaha iyo duuliyeyaasha inay ogaadaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qayb muhiim ah oo ka mid ah kontaroolada duulimaadka diyaaradda. Xeer -ilaaliyeyaasha sida FAA waxay u adeegaan hawl muhiim ah si loo hubiyo amniga dadweynaha duulaya. Qof kasta oo ku fikiraya inuu si dambiile ah u carqaladeeyo hawsha xeer -ilaaliyaha, eedayntani waxay caddaynaysaa in Waaxda Caddaaladdu raacdo xaqiiqda oo kula xisaabtami doonto. ”
“Iskudayga badbaadinta lacagta Boeing, Forkner ayaa la sheegay inuu ka hayey xog muhiim ah maamulayaasha,” ayuu yiri Ku -simaha Xeer -ilaaliyaha Mareykanka Chad E. Meacham oo ka tirsan Degmada Waqooyiga Texas. “Doorashadiisii ​​naxdinta lahayd ee uu ku marin habaabiyay FAA waxay caqabad ku noqotay kartida hay’addu u leedahay inay ilaaliso duuliyeyaasha iyo duuliye -yaasha bidix, iyada oo aan xog laga haynin qaar ka mid ah kontaroolada duulimaadka 737 MAX. Waaxda Caddaaladdu uma dulqaadan doonto wax isdabamarin - gaar ahaan warshadaha ay aad u sareyso. ”
“Forkner ayaa la sheegay inuu qariyey xog muhiim ah oo ku saabsan Boeing 737 MAX oo uu khiyaaneeyey FAA, taasoo muujinaysa ixtiraamdarro la’aan mas’uuliyadiisa iyo nabadgelyada macaamiisha diyaaradaha iyo shaqaalaha,” ayuu yiri Kaaliyaha Agaasimaha Calvin Shivers ee FBI -da. "FBI waxay sii wadi doontaa inay la xisaabtamto shaqsiyaadka sida Forker falalkooda khiyaanada ah ee wax u dhimaya amniga dadweynaha."
“Ma jirto marmarsiiyo kuwa khiyaaneeya xeer -ilaaliyayaasha si ay u helaan dano shaqsiyeed ama dano ganacsi,” ayuu yiri Kormeeraha Guud Eric J. Soskin oo ka tirsan Waaxda Gaadiidka Mareykanka. “Xafiiskeenu wuxuu u shaqeeyaa si joogto ah si uu gacan uga geysto in cirka loo ilaaliyo duulimaadka iyo in laga ilaaliyo dadka safarka ah khatar aan loo baahnayn. Eedeymaha maanta ayaa muujinaya sida ay nooga go'an tahay in aan la shaqayno hay'adaha sharci fulinta iyo la -hawlgalayaasha xeer -ilaaliyaha si aan mas'uul uga noqonno kuwa naftooda halis geliya. "
Sida ku cad dukumiintiyada maxkamadda, Boeing waxay billowday horumarinta iyo suuqgeynta 737 MAX gudaha iyo agagaarka Juun 2011. FAA AEG ayaa mas'uul ka ahayd go'aaminta heerka ugu hooseeya ee tababarka duuliye ee looga baahan yahay duuliye si uu ugu duuliyo 737 MAX diyaarad fadhigeedu yahay Mareykanka, kuna saleysan dabeecadda iyo baaxadda farqiga u dhexeeya 737 MAX iyo nooca hore ee diyaaradda Boeing ee 737, 737 Generation Next (NG). Gabagabadii qiimayntan, FAA AEG waxay daabacday Warbixinta Guddiga Jaangooynta Duullimaadka 737 MAX (Warbixinta FSB), oo ay ka mid yihiin, waxyaabo kale, kala duwanaanshaha FAA AEG ee go'aaminta tababarka 737 MAX, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan kala duwanaanshaha u dhexeeya 737 MAX iyo 737 NG. Dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee fadhigoodu yahay Mareykanka ayaa laga rabay inay isticmaalaan macluumaadka ku jira Warbixinta 737 MAX FSB oo saldhig u ah inay tababaraan duuliyeyaashooda duulimaadka diyaaradda.
Iyada oo ah Boeing 737 MAX Chief pilot Pilot, Forkner wuxuu hogaamiyay Kooxda Farsamada Duulimaadka 737 MAX wuxuuna mas'uul ka ahaa inuu FAA AEG siiyo run, sax ah, oo dhammaystiran oo ku saabsan kala duwanaanshaha u dhexeeya 737 MAX iyo 737 NG ee qiimeynta FAA AEG, diyaarinta, iyo daabacaadda Warbixinta FSB 737 MAX.
Gudaha iyo agagaarka Noofambar 2016, Forkner wuxuu helay macluumaad ku saabsan isbeddel muhiim u ah MCAS. Halkii uu la wadaagi lahaa macluumaadka ku saabsan isbeddelkan FAA AEG, Forkner ayaa la sheegay inuu si ulakac ah u qariyay xogtan oo uu khiyaameeyay FAA AEG ku saabsan MCAS. Sababtoo ah khiyaanadiisa la sheegay, FAA AEG ayaa tirtiray dhammaan tixraacyadii MCAS laga soo bilaabo nuqulkii ugu dambeeyay ee Warbixinta 737 MAX FSB ee la daabacay bishii Luulyo 2017. Sidaas darteed, duuliyeyaashii u duulinayay 737 MAX macaamiisha Boeing ee macmiilka diyaaradaha ee fadhigoodu yahay Mareykanka wax macluumaad ah lama siin ku saabsan MCAS oo ku jira buugaagtooda iyo agabkooda tababarka. Forkner wuxuu u diray nuqulada Warbixinta 737 MAX FSB macaamiisha Boeing ee fadhigeedu yahay Mareykanka 737 MAX, laakiin wuxuu ka reebay macaamiishan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan MCAS iyo hannaanka qiimeynta Warbixinta 737 MAX FSB.
Oktoobar 29keedii, 2018, ka dib markii FAA AEG ay ogaatay in Lion Air Flight 610 - 737 MAX - ay ku burburtay meel u dhow Jakarta, Indonesia, wax yar ka dib markii ay duushay iyo in MCAS uu shaqeynayay daqiiqado ka hor shilka, FAA AEG ayaa ogaatay macluumaadka ku saabsan isbeddelka muhiimka ah ee MCAS ee Forkner uu qariyey. Markii ay ogaadeen xogtan, FAA AEG waxay bilowday dib -u -eegista iyo qiimeynta MCAS.
Qiyaastii 10 -kii Maarso, 2019, iyadoo FAA AEG ay weli dib -u -eegis ku samaynayso MCAS, FAA AEG waxay ogaatay in Ethiopian Airlines Flight 302 - 737 MAX - ay ku burburtay meel u dhow Ejere, Ethiopia, wax yar ka dib markii ay duushay iyo in MCAS uu shaqeynayay daqiiqado ka hor shilka. Wax yar ka dib shilkaas, dhammaan diyaaradaha 737 MAX waxaa lagu joojiyay Mareykanka.
Forkner waxaa lagu soo oogay laba dacwadood oo khiyaano ah oo ku lug leh qaybo diyaaradeed oo ka tirsan ganacsiga gobolada dhexe iyo afar tirooyin khiyaano silig ah. Waxaa la filayaa inuu markii ugu horraysay ka soo muuqdo maxkamad Jimcaha Fort Worth, Texas, hortiisa Garsooraha Majistrate -ka Mareykanka Jeffrey L. Cureton oo ka tirsan Maxkamadda Degmada Mareykanka ee Degmada Waqooyiga Texas. Haddii lagu helo dambiga, wuxuu wajahayaa ciqaab ugu badnaan ah 20 sano oo xarig ah marka la tiriyo khiyaano silig kasta iyo 10 sano oo xabsi ah marka la tiriyo khiyaano kasta oo ku lug leh qaybaha diyaaradaha ee ganacsiga gobollada kale. Garsooraha maxkamadda degmada federaalka ayaa go'aamin doona xukun kasta ka dib marka uu tixgeliyo Tilmaamaha Xukunka Mareykanka iyo arrimo kale oo qaanuun ah.
Xafiisyada Chicago ee FBI-da iyo DOT-OIG ayaa baaraya kiiska, iyagoo kaashanaya FBI-da kale iyo xafiisyada goobta DOT-OIG.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamadeynta Cory E. Jacobs, Kaaliyaha Madaxa Michael T. O'Neill, iyo Qareenka Maxkamadeynta Scott Armstrong oo ka tirsan Qeybta Khiyaanada Qeybta Dambiyada, iyo Kaaliyaha Xeer Ilaaliyaha Mareykanka Alex Lewis oo ka tirsan Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Mareykanka ee Degmada Waqooyiga Texas ayaa dacwad ku oogaya.
Eedeyntu waa eedeyn kaliya, dhamaan eedeysanayaashana waxaa loo haystaa dambi laawe ilaa laga cadeeyo dambiga ka baxsan shaki macquul ah ee maxkamada.
Nuqul ka mid ah eedaynta runta ah: